Gaal Trump Oo Magaalada Qudus U Aqoonsaday Caasimadda Yahuudda. – Bogga Calamada.com
Gaal Trump Oo Magaalada Qudus U Aqoonsaday Caasimadda Yahuudda.
December 6, 2017 7:29 pm Views: 277
Madaxweynaha dowlada Saliibiyadda Mareykanka Gaalka Madaxa looga jira ee lagu magacaabo Donald Trump ayaa sheegay in si rasmi ah Mareykanku u iclaamiyeen in Caasimadda ‘maamulka Yahuuda’ ay tahay magaalada Alqudus.
Gaalkan ayaa sheegay in ku dhawaaqista arintaan ay aad uga soo dib dhaceen taasi oo muujineysa inuu ula jeeda in madaxdii isaga uga horeysay Kursiga Aqalka Mareykanka ku eedeynayo iney aheed in xilli hore magaalada Qudus u aqoonsadaan Caasimada maamulka Yahuuda.
Wuxuu amray wasaaradda arrimaha dibadda Saliibiyadda Mareykanka in si degdeg ah safaaradda Mareykanka ugu raraan magaalada Alqudus, tallaabadan ayaa ah mid xasaasiyad iyo caro gelinaysa Muslimiinta caalamka meel walba oo ay joogaan.
Magaalada Alqudus oo uu ku yaal Masjidka Barakeysan ee Al-aqsaa waa magaalo muslimiintu leeyihiin oo gumeysi ku jirta muddo ka badan 65 sanadood,iyadoona Masjidka Al-aqsaa uu yahay Qibladii ugu horeysay ee Muslimiinta waana Masjidka Saddex-aad ee ugu Ajirka Badan Masaajidda Caalamka.
Maamulka Sahyuuniyadda Yahuuda ee xooga lagu dajiyay dhulka Muslimiinta Falistiin ayaa waligood naftooda uga sheekeynayay iney caasimadooda tahay magaalada Al-qudus.
Hadalkan ka soo baxay gaalka Mareykanka ayaa ah mid ka cinayo Muslimiinta Caalamka,waxaana Allaah SW weydiisaneynaa in Mujaahidiinta Caalamka u fududeeyo xureynta Masjidka Barakeysan ee Al-aqsaa iyo sidii guud ahaan dhulka Muslimiinta Falistiin looga cirib tiri lahaa Yahuuda Sahyuuniyadda ah ee xooga lagu dajiyay dhulkaasi.